Ny lahatsoratr'i Albert Nieto momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Albert Nieto
tag voa dia Orinasa momba ny doka ara-pifanekena lehibe izay mamorona vahaolana tena mahomby sy mahasarika ho an'ny atiny fijerena premium premium mifandraika amin'izany, manome tanjona sy fiverenana ho an'ny mpanonta ambony sy marika tsara indrindra. Ny AI mifototra amin'ny orinasa dia mamela ny marika hifaneraserana amin'ireo mpanjifa ao anatin'ny tontolon'ny fahalianany amin'ny sehatra tsy misy cookie.
Alarobia, Septambra 29, 2021 Alarobia, Septambra 29, 2021 Albert Nieto
Google dia nanambara vao haingana fa mampihemotra ny drafitra fanafoanana ny cookies an'ny antoko fahatelo ao amin'ny tranokala Chrome hatramin'ny 2023, herintaona taty aoriana noho ny nomaniny tany am-boalohany. Na izany aza, na dia mety hahatsapa ho toy ny dingana mihemotra aza ny fanambarana ho an'ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa, ny indostria midadasika kosa dia mbola manohy hatrany ny drafitra hanafoanana ny fampiasana cookies an'ny antoko fahatelo. Apple dia nandefa ny fanovana ny IDFA (ID for Advertisers) ho ampahany amin'ny fanavaozana ny iOS 14.5, izay